Global Voices teny Malagasy » Ny tantaran’ny Biryani : Ny Biryani ve no sakafom-pirenena any Pakistana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Janoary 2019 12:54 GMT 1	 · Mpanoratra Qurratulain (Annie) Zaman Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hehy, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna
Ny Biryani  no mpanjakan'ny lakozia Aziatika Atsimo sady sakafo ankafizin'ny rehetra. Ny fikarakarana ny lafika, matetika miaraka amin'ny vary manitra basmati  na kalizira, dia norarahana safrona ary misy hena voatetitetika mampilendalenda. Ny fofony hamantarana azy no hamantaran'ny rehetra fa hisy ny fotoan-dehibe. Tena sakafo malaza any Pakistana izy ity ary matetika mipoitra ny fanontaniana hoe: “Moa ve izy ity no sakafom-pirenen'i Pakistana”?
Raha sakafo natokana ho an'ny mpanjaka izy tany aloha, ankehitriny kosa ny biryani dia maneho ny tsiro sy ny fomban-drazana any amin'ny toerana tsirairay ary sakafo mahazatra  any amin'ny toerana maro any Pakistana. Na dia izany aza anefa dia misy ny adihevitra raha ny Biryani no sakafom-pirenen'i Pakistana. Toa tsy mbola nanambara  ny amin'izay sakafo atao ho sakafom-pirenena ny governemantan'i Pakistana satria tsy misy afa-tsy nahandro iray ihany no malaza any amin'ny faritra rehetra ary matetika dia tsy takatry  ny Pakistaney maro ny sakafo matsiro toy izany. Na izany aza, iray amin'ireo tena mpifaninana matanjaka  hisalotra izany ny Biryani.
Ny teny hoe ” biryani ” dia avy amin'ny teny Persiana hoe “birian” izay midika hoe “endasina aloha vao handroana.” Io sakafo vary mifangaro avy any Azia Atsimo io dia niandoha tany amin'ny Miozolomana ao amin'ny zanakaontinanta Indiana. Anisan'ny sakafo Mughlai izay mampalaza an'i India izy ity ary nivoatra nanomboka tamin'ny taonjato faha-15 ka hatramin'ny taonjato faha-19 nanjakan'ny ampira Mughal . Nanandratra ny fahandroan-tsakafo ho endrika fanehoana zavakanto ny Mughals, tamin'ny alàlan'ny fampidirina nahandro maro tao India toy ny biryani, pilaf , ary kebabs .
Tany avaratr'i India no nampidiran'ny Mughals ny Biryani voalohany. Fantatra tamin'ny anarana hoe pakka Biryani izy tamin'izany satria efa nahandroana mialoha ny ankamaroan'ny fangaro ary avy eo nafangaro tao anaty vilany (deg) sy napetraka teo ambony afo malefaka (dum) hamaranana ny nahandro. Nanafangaro ny Biryani tamin'ny Katcha (manta) ny Nizam avy ao Hyderabad  (fanjakana) , izay ahitana ny ankamaroan'ny fangaro mbola manta ary hafangaro anaty vilany mifandanja tsara. Nohidiana ilay vilany ary napetraka eo ambony afo malefaka mandra-paha-masany tsara.
Ny sasany amin'ireo tsiron-tsakafom-paritra Biryanis any Pakistana dia ahitana  ny Sindhi Biryani, Punjabi Biryani, Bohri biryani, Afghani Biryani, na ny Mughlai Biryani nentim-paharazana na Hyderabadi amin'ny endrika Biryani.
Araka ny hevitry ny mpitsikera sakafo Bisma Tirmizi , ny Sindhi Biryani dia karazana pulao  navadiky ny mughlai, niaraka tamin'ny tsiro mafilotra sy mifangaro kokoa.
Misy adihevitra hafa izay mahazatra any India sy Pakistana mikasika ny hoe tokony asiana Aloo (ovy) ve ao amin'ny Biryani sa tsia. Toa tian'ny olona sasany foana ny tsirony na miaraka na tsia amin'ny ovy. Tany am-piandohan'ity taona ity, nandefa fitsapan-kevitra  tao amin'ny media sosialy i Manal Aijaz, bilaogera Pakistaney. Nandritra ny dimy andro manaraka, dia toa hita nandray am-pahamatorana  ity fitsapan-kevitra ity ny tao amin'ny tranokalan'ny Twitter Pakistaney. Indro no valiny:
Raha te hanandrana ny Biryanis Pakistaney ianao dia jereo ny nahandron'i Faatimah amin'ny Biryani Pakistaney tsiron'akoho mora sy nentim-paharazana . Azonao atao ihany koa ny mijery ny nahandron'i Ainy ho an'ny Punjabi Biryani  , Biryani Pakistaney miaraka amin'ny henan'ondry  sy ny hafa maro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/29/134218/
 sakafo mahazatra: https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistani_cuisine
 tsy mbola nanambara: https://www.quora.com/What-is-Pakistan-national-dish/answer/Ahmed-Faraz-Rao
 tsy takatry: https://blogs.tribune.com.pk/story/29568/what-is-pakistans-national-dish-hint-its-not-daal-roti/
 mpifaninana matanjaka: http://www.kluchit.com/we-bet-you-dont-know-what-national-dish-of-pakistan-is/
 ampira Mughal: https://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_Empire
 Nizam avy ao Hyderabad: https://en.wikipedia.org/wiki/Nizam_of_Hyderabad
 nandefa fitsapan-kevitra: https://www.indiatoday.in/lifestyle/what-s-hot/story/biryani-potato-india-pakistan-karachi-kolkata-lucknow-hyderabad-lahore-food-debate-1163867-2018-02-08
 nandray am-pahamatorana: https://www.parhlo.com/biryani-with-aloo-without-aloo/
 Biryani Pakistaney tsiron'akoho mora sy nentim-paharazana: http://www.thismuslimgirlbakes.com/2014/03/easy-and-traditional-pakistani-chicken.html
 Biryani Pakistaney miaraka amin'ny henan'ondry: https://www.saveur.com/article/Recipes/Pakistani-Lamb-Biryani